ပျိုးခင်းအိုး NP-10T - တရုတ် Qingdao ဘုရင်ကကောင်းနယူးပစ္စည်းများ
Ltd. , Qingdao ဘုရင်ကကောင်းနယူးပစ္စည်းများ Co. , က, ပျိုးခင်းအိုး PP, PE နဲ့ poe ၏အရည်အသွေးမြင့်ကုန်ကြမ်းကုန်ကြမ်းများနှင့်တိကျမှုအချိုးအစားသုံးခုအမျိုးမျိုး / ကွန်တိန်နာ (ပန်းပွင့်အိုးများ) ကိုအသုံးပြုခြင်း၏သုံးမျိုး၏အားသာချက်များကိုအပြည့်အဝဆော့ကစားပေး ကုန်ကြမ်းအလွန်တိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ရန်ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေး, နှင့်များ၏ဝန်ဆောင်မှုဘဝရှည် ပျိုးခင်း Pot . ပျိုးခင်းအိုး / ကွန်တိန်နာ (ပန်းပွင့်အိုး) ဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်းထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါသည်, ရေနုတ်မြောင်းများနှင့်လေဝင်လေထွက် function ကိုအကူအညီနဲ့ပန်းမျှမျှတတတိုးတက်မှုနှုန်းတက်ပေါက်နေသည်။ အဆိုပါဂါလံအိုးများ၏အထူးဒီဇိုင်းအစွန်းဖွဲ့စည်းပုံမှာအလွန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, တင်နှင့်သိုလှောင်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ ကျယ်ပြန့်ပန်းပွင့်, ပျိုးခင်းစက်ရုံ, ဟင်းသီးဟင်းရွက်, ဝါဂွမ်း, ဖရဲသီး, ဟင်းသီးဟင်းရွက်များတွင်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
Qingdao ဘုရင်ကကောင်းနယူးပစ္စည်းများကုမ္ပဏီလီမိတက်၏, Ltd. ခြံထွက်ပစ္စည်း ဂါလန် Pot s(nursery pots/container), including UV anti-aging additives, long service life, outdoor use can achieve3years; At the same time it extrusion resistant, not easy deformation, not easy damaged, plate light energy saving, convenient and plant transplanting, cost savings, green environmental protection, 100% recyclable, professional for evergreen plants such as trees, shrubs, flowers design, it isalarge garden at domestic and abroad, garden nursery seedling production the best Nursery container, Qingdao King Good New Materials Co., Ltd. making the ဂါလန် Pot s(nursery pots/container) products are exported to Europe, the United States, Canada, the Middle East all over the world.
ယခင်: ပျိုးခင်းအိုး NP-15S
နောက်တစ်ခု: ပျိုးခင်းအိုး NP-15T
Black က Square ကိုပလတ်စတစ်ပန်းအိုး
ပန်းပွင့်က Black Pot
ပလပ်စတစ်က Round ပန်း Pot